08/06/2018 - Page 3 sur 4 -
Fizarana governemanta : Mitady tsy hanaiky ny fanapahan’ ny HCC ny TIM
Ankoatra ny efa fizirizirian’ny parlemantera TIM amin’ ny tsy fanekena ny safidin’ny parlemantera mpiara-mitolona tamin’ny fanendrena ny praiminisitra ny marimaritra iraisana, dia indro indray ny fizirizirian’izy ireo amin’ny fitadiavana ny minisiteran’ny Fiandrianam-pirenena. Nambaran’ny maître Hanitra …Tohiny
Fananganana ny tsenan’Ivato : Manaiky ny fandaminana ireo mpivarotra
Raha toa ka nisedra olana ny fananganana ny tsenan’Ivato teo amin’ny ady fototra, izay noravan’ny andian’olona, dia nilamina izany ankehitriny. Araka ny fampitam-baovao mantsy, dia manaiky ny fandaminana rehetra amin’ny fananganana izany tsena eny amin’ny …Tohiny
Hohoron-tany miseho any Mayotte : Ahiana hisy fiantraikany eto an-toerana
Ahiana hisy fiantraikany eto Madagasikara ny horohoron-tany niseho tany Mayotte, izay nanomboka nahery vaika ny 10 mey lasa teo hatramin’izao. Nitondra ny fanazavana mahakasika izany ny manam-pahaizana Andry Ramanantsoa lehiben’ny laboratoara ao amin’ny ivon-toerana misahana …Tohiny
Fanimbana tontolo iainana : Mbola mitana ny laharana voalohany ny doro tanety
Ampahatelon’ny nofon-tany eto Madagasikara amin’izao fotoana izao no simba raha ny fitsirihana nataon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, ny haivoary ary ny ala izay ny any amin’ny faritra Boeny no tena ahitana ny fahasimbana betsaka. Vokatry ny …Tohiny
Betsaka ny tsy fanarahan-dalàna izay ataon’ny olom-pirenena tato ho ato. Iray amin’ireny ny resaka fitsaram-bahoaka izay efa tena mampivarahontsana ny fahitana azy. Antony maromaro no mety mahatonga an’io fitsaram-bahoaka io raha ny fanazavana nomen’ny mpahay ...Tohiny